Nchịkọta nkenke nke ọrụ "La casa de Bernarda Alba" nke Federico García Lorca | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nchịkọta nkenke nke ọrụ "Thelọ Bernarda Alba" nke Federico García Lorca dere
Carmen Guillen | | Genres, Akwụkwọ, Akwụkwọ, Aterlọ ihe nkiri, ọtụtụ
A, ihe kacha ekewet na mara Federico Garcia Lorca ọ bụ ya uri, Otú ọ dị, ọ na-ede ihe nkiri. Ezigbo akụkọ na-egosi nke a nnukwu ọrụ ya "Bernlọ Bernarda Alba", ihe eji ede ihe edere nke etinyegoro otutu oge n'okpuru ndi nduzi di iche na otutu ihe omuma anyi Spanish.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe egwuri egwu a bụ ma mara isi ihe dị na ya, gaa n’ihu na-agụ obere ihu ala. Taa, anyị na-enye gị nchịkọta dị mkpirikpi nke ọrụ ahụ "Bernlọ Bernarda Alba" goo Federico García Lorca mgbe anyị nwere ozi ahụ.
1 García Lorca, onye na-eme egwuregwu
1.1 "Bernlọ Bernarda Alba" (1936)
1.1.1 Mmepe nke ọrụ nke ọrụ ahụ
García Lorca, onye na-eme egwuregwu
García Lorca bụ a amamiihe edemede na mgbakwunye na ọmarịcha uri, onye amarala. Mana ọ bụghị naanị na ọ ghọtara onwe ya mgbe ọ na-ede ihe nkiri, mana ọ mikpuru n'ime ya kpamkpam: ya onwe ya dọtara uwe maka uwe ndị na-eme ihe nkiri, kpebiri n'ụdị maka egwuregwu ha ma duziekwa nnochite anya.
N’afọ 1920 egwuregwu mbụ ya na-apụta: "Hex nke Butterfly". Ọrụ gbalịrị iru obodo dị iche iche nke Spanish na ìgwè ahụ Barrack. Ebumnuche ya bụ ime ka ụlọ ihe nkiri ahụ rute na klaasị mmadụ niile.
na gburugburu nke ụlọ ihe nkiri ya yiri otu ihe ahụ dị na abụ ya: mgba maka Libertad, nke ịhụnanya na ọnwụ, wdg. N'ime ọrụ ya, ụmụ nwanyị na-apụ apụ, na-agbaghakarị ya, nke onye edemede ahụ ji amamihe na-emepụta.
Na ọrụ ya ọdịnala na-agwakọta na mmeghari ohuru, dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile emere na Ọgbọ nke 27. Na mgbakwunye, Lorca bụ onye edemede maara nke ọma ihe ọhụụ ọhụụ ọ bụla. Ọbụna na ihe ndị a niile, ọ naghị akwụsị iburu n'uche ihe ndị na-ezo aka na ọdịnala akụkọ ọdịnala na akụkọ ifo. Theaterlọ ihe nkiri ya na-eji ihe atụ na iji akara eme ihe ugboro ugboro na, ọ bụ ezie na na mbụ ọ na-atụ aka n'amaokwu, emesịa ọ na-eche maka iji prose. Mmekọrịta a dị n'etiti uri-prose-nkiri, Lorca n'onwe ya gosipụtara ya dị ka ndị a:
«Thelọ ihe nkiri ahụ bụ uri nke si na akwụkwọ ahụ pụta wee ghọọ mmadụ. Mgbe emechara ya, o kwuo okwu ma tie mkpu, bewe ákwá ma nwee olileanya. Thelọ ihe nkiri ahụ chọrọ ka ihe odide ndị na-egosi na ebe ahụ na-eyi uwe uri ma n'otu oge ahụ gosi ọkpụkpụ ha, ọbara ... ».
Federico García Lorca. 119 afọ ọmụmụ ya. Mkpụrụokwu na amaokwu
"Bernlọ Bernarda Alba" (1936)
Ọrụ a na-elekwasị anya na mmegbu omume na mmegide mmekọahụ nke Bernarda gosipụtara maka ụmụ ya nwanyị. Bernarda na-etinye ha iche afọ 8, na-eme nkwekọrịta mmekọrịta ọha na eze banyere iru uju enweghị uche. Ọdịdị nke Pepe el Romano, nke dị njikere ịlụ ọkpara ada, Angustias, na-ebute esemokwu ahụ. Themụ nwanyị nile, ma e wezụga nke ọdụdụ, Adela, na-anabata ndokwa nke nne ha. Adela ga-abụ onye nnupụisi, nke a na-ahụkarị na Lorca, bụ nke a na-ewepụta mmegide n'etiti ikike na ọchịchọ.
Edere ya na oge nke onye dere ya ma site n'ike mmụọ nsọ site na ihe ndị mere eme, ọ bụ nnukwu ngosipụta dị egwu na omenala nke oge ahụ. A na-egosipụta ọchịchị aka ike nke nsọpụrụ a na-asọpụrụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site n'eziokwu dị ukwuu na omume Bernarda, bụ onye na-egbochi ọchịchọ maka nnwere onwe na ndụ nke omume Adela.
Mmepe nke ọrụ nke ọrụ ahụ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgụ ọrụ a n'oge na-adịghị anya, anyị na-akwado ka ị kwụsị ịgụ ebe a, ebe anyị nwere ike ikpughe nnukwu akụkụ nke ihe na-eme na ọrụ "La casa de Bernarda Alba".
Mee otu: Mgbe di ya nwụrụ, Bernarda Alba manyere ụmụ ya nwanyị ise (Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio na Adela) ka ha ruo uju afọ 8 n'ahịrị. N’etiti gburugburu ebe a na-emegbu ndị mmadụ, Adela (nke ọdụdụ n’ime ụmụ nwanyị niile) nụrụ na Angustias, nwanne nwanyị nke okenye, ga-alụ Pepe el Romano, onye Adela nwere mmekọrịta nzuzo.
Mee iwu abụọ: La Poncia chọpụtara mmekọrịta dị n'etiti Adela na Pepe el Romano.
Mee nke atọ: Adela nupụrụ isi ma kwuo na ya kwesịrị ịbụ nwunye Pepe el Romano. Bernarda gbara ya ụra ma kwuo na ya egbuola ya n'agbanyeghị agbagburu ya. N'adịghị olileanya, Adela gbara ọsọ wee kpọchie onwe ya dị njikere igbu onwe ya.
Agụọla ma ọ bụ hụ egwuregwu a? Theaterlọ ihe nkiri na-amasị gị ịgụ ma ọ bụ ịhụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Nchịkọta nkenke nke ọrụ "Thelọ Bernarda Alba" nke Federico García Lorca dere
Zaghachi na rigoberto
ọ dịghị nkịta
eme nzuzu Tula anyị xd
Gwa m twp gi abuo
ọ readingụ ọgụgụ na-atọ ụtọ mere ka onye nkụzi m nwee isi nkwọcha ahụ
onye nzuzu jọgburu onwe ya
Ndị + kbron dijo
To bald your fucking nne kabron
Zaghachi El + kbron
Mụọ ahụhụ bastards kliaos ajhdsaudajsdhsa awante ọla kọpa: v
Zaghachi El tuolon
ihe lestico dijo
gbachiri ndi nwanyi na nwanyi ozo bie, racha m mmanu mmanu mmanu
Zaghachi el lestico
Anaghị m achọ ịma banyere okwu ọjọọ gị na shei !!!! jide mkpọtụ!
nnenne gi dijo
Zaghachi na tumami
Otutu ihe ichoro ime ka ekpughere tula gi
TAS ☆ αα dijo
tas nọ ebe a
Zaghachi TAS α αris
ọ haha dijo
eu conchudos A nọ m naanị ebe a maka na m ga-eme mkpokọta ọnụ na-a suụ ọkpọ ọ bụla ọzọ
Zaghachi ya haha
Up Spain cabroneeees! Nchọpụta ọzọ nke America anyị mere ka ị hụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike iwepụ gị na Old Age maka oge nke abụọ
Zaghachi Susana Oria
Shei nwanne gị nwanyị nke Spain, Spain Africa nke Europe hahaha. Emebiri America site na ọdịnala ya na-asọ oyi, ndị na-apụnara mmadụ ihe, ndị ohi na ndị na-edina mmadụ n'ike, ka anyị gaa ihe ha na-eme.
shei nwanne gị nwanyị si Spain
mmeri aranda dijo
Ọ na-amasị m ka m na-ahụ ka a na-enwe ekele maka nkọwa nke ndị na-eme ihe nkiri ma anyị anaghị ahapụ echiche ahụ
Zaghachi victoria aranda
ỌR I M H ITR AND YA NA LEI. Enweela M Ọ THEụ Otu Ihe Abụọ. Ọ dị ezigbo mma
_Ndị snowman ahụ, ụdị ihe nkiri Jo Nesbø kụrụ afọ n'ala